Ichibi: 2 lokulala Waterfront Cottages
Indlu yamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguPeter
UPeter ufumene umlinganiselo weenkwenkwezi eziyi-5 kwi-100% yeendwendwe zakutshanje.
I-90% yeendwendwe zakutshanje inike uPeter iinkwenkwezi eziyi-5 kunxibelelwano.
Siziikhilomitha nje ezi-5 ukusuka eLake George, NY. Sinikezela ngezindlu zokuhlala ezicocekileyo eziphambi kwamanzi ezineendawo zomlilo zabucala ezijongene neLake Vanare kwiiNtaba zeAdirondack. Indawo yam ilungile kumaqabane kunye neentsapho. Ishumi elinanye kwizindlu zam ezili-14 ezijonge echibini kwaye zonke izindlu zasekhaya zingaphakathi komzuzu omnye wokuhamba ukuya kulwandle lwethu olunesanti lwaBucala kwaye simahla ukusebenzisa izikhephe ezibhexwayo kunye namaphenyane. Indlu nganye inendawo yokucima umlilo, itafile yepikiniki, i-charcoal grill, kunye nezitulo. I-11% yerhafu kunye nayo nayiphi na imirhumo yesilwanyana sasekhaya iya kuqokelelwa xa ufika.
Indawo yethu yokulala emi-2 yaseLake inebhedi yobukhulu bokumkanikazi kwigumbi elinye lokulala kunye nebhedi ephindwe kathathu kwigumbi lokulala lesibini. Ibhedi ephindwe kathathu ilala i-2 kubukhulu obugcweleyo obusezantsi bunk kunye ne-1 kubukhulu obungamawele obuphezulu bunk. Ikwanayo nekhitshi eligcweleyo kunye negumbi lokuhlambela elineshawa (akukho bhafu). Ayinalo igumbi losapho. Uya kuba nendawo yomlilo yabucala ejongene nechibi elinezitulo, itafile yepikiniki, kunye ne-charcoal grill.
4.36 out of 5 stars from 11 reviews
4.36 · Izimvo eziyi-11
Sifumana kumgama weemayile enye yokukhwela ihashe, i-whitewater rafting kunye neendawo zokutyela ezimbini. Sikwiikhilomitha ezi-5 kuphela ukusuka kwiLali yaseLake George kunye nazo zonke iindawo ezinomtsalane, kunye neemayile ezili-9 ukusuka eGreat Escape Six-Flags Park kunye neAdirondack Outlets yaseLake George:
Ndihlala kwipropathi kwaye iyafumaneka kwindwendwe yam.